मृ’त्युपछि के हुन्छ ? के साँचीकै मानिसको फे’री ज’न्म हुन्छ र ?
रोचक मृ’त्युपछि के हुन्छ ? के साँचीकै मानिसको फे’री ज’न्म हुन्छ र ?
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: पृथ्वीमा जन्मने हरेकको मनमा उठ्ने साझा प्रश्न हो यो । जन्मपछि मृ’त्यु हुन्छ नै । तर, मृ’त्युपछि के हुन्छ ? अक्सर मानव-मनमा यो जिज्ञासा रहिरन्छ ।
किनभने, यो यस्तो रहस्य हो जसलाई पृष्टि गर्ने सर्बमान्य आधार र प्रमाणहरु छैनन् । त्यसैले पुस्तौदेखि पुस्तौसम्म यो प्रश्न रहेको छ, ‘आखिर म’रेपछि के हुन्छ ?’
विभिन्न ध’र्म, सं’स्कार अनुसार यसको आ-आफ्नै व्याख्या छ । कसैले मृत्युपछि आ’त्मा जीवित रहने बताएका छन् भने कसैले सम्पूर्ण कुरा श’रीरसँगै न’ष्ट हुने भनेको छ ।
भगवान कृष्णले भनेका छन्, ‘न यो श’रीर तिम्रो हो, न तिमी यस श’रीरका हौ । यो श’रीर पाँच त’त्वले बनेको छ-अ’ग्नी, जल, बायु, पृ’थ्वी र आकास । एकदिन यो शरीर यहि पाँच तत्वमा वि’लिन हुन्छ ।’ एक लेखमा उल्लेख अनुसार, श’रीर तीन किसिमको हुन्छ, शा’रीरिक (स्थूल), मा’नसिक (मनोदेह), बौद्धिक (कारण देह) र सुक्ष्म अहं (महाकारण देह) ।
व्यक्तिको मृ’त्युपछि स्थुल श’रीर माटोमा वि’लय हुन्छ । सुक्ष्म श’रीर रहन्छ । सुक्ष्म शरीर बिस्मृ’त भएपछि नै मानिसले दोस्रो श’रीर धारण गर्छ । अर्को लेखमा के भनिएको छ भने, मृ’त्युपछि भौतिक शरी’रको अस्तित्व समा’प्त हुन्छ । तर, अन्य घ’टक र चे’तनाको अस्तित्व बाँकी रहन्छ ।
भौतिक श’रीरका अतिरिक्त मनुष्यका अस्तित्वका अन्य घ’टक हो, सुक्ष्म श’रीर (लिं’ग देह), जो मनोदे’ह, कारण दे’ह र महाका’राण दे’हबाट बनेको हुन्छ । यो सु’क्ष्म श’रीर भूलोक (पृथ्वी) छाडेर अन्य १३ सू’क्षम लोकमध्ये एकमा पुग्छ । त्यस लेखमा भनिएको छ, ‘यो ब्रम्हा’न्डमा १४ लोक छ ।
यसमध्ये ७ लोक सकारात्क र ६ नकारात्मक । सारमा के बुझिन्छ भने, मान्छेले पृथ्वीलोकमा बाँचु’ञ्जेल गर्ने कर्मको लेखाजोखाको आधारमा ऊ त्यही किसिमको लो’कमा पुग्छन् । जीवनमा साधना गरे, कुनै छलक’पट नगरेका, नराम्रो कृ’त्य नगरेकाहरु सका’रात्मक लोकमा पुग्ने बताइएको छ ।
गरु’ड पुराणले मृ’त्युपछि आ’त्मासँग हुने व्यवहारको व्याख्या गरेको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘जव आ’त्माले श’रीर छाड्छ, आ’त्मालाई लिन दुई य’मदुत आउँछन्, एउटा धर्मा’त्माको लागि र अर्को पा’पीका लागि । जसले जीवनमा राम्रो काम गरेका छन्, पृष्यको काम गरेका छन्, उसको प्रा’ण निस्कन गाह्रो हुँदैन । तर, पा’पीले धेरै पी’डा सहनुपर्छ ।
आ’त्मा जीवित मृ’त्युपछि के हुन्छ ? यसमा हरेक ध’र्मले अलग अलग जवाफ दिएको छ । कुनै ध’र्मले भनेको छ, मृ’त्युपछि राम्रो मान्छे स्वर्ग जान्छ, नराम्रो न’र्क ।
अर्कोले भनेको मृ’त्युपछि मानिस आत्मिक लोकमा आफ्ना पूर्वज भएका ठाँउमा पुग्छन् । फेरी अर्कोले भनेको छ, मृ’त्युपछि मासिन पाताल लो’कमा जान्छन्, जहाँ उनको कर्म लेखिएको हुन्छ । यि सबैको सार भनेको मृ’त्युपछि पनि एक यस्तो अंश हुन्छ, जो जीवित रहन्छ । र, यो सधै अमर हुन्छ ।
के हुन्छ मृ’त्युपछि सामन्य व्यक्ति जब श’रीर छाड्छन्, सबैभन्दा पहिला उसको आँ’खामा गहिरो अ’ध्याँरो छाउछ । उसले कुनैपनि किसिमको अनुभव गर्न सक्दैन । केहि समयसम्म केहि आवाज सुन्न सक्छ, दृश्य देख्न सक्छ जस्तो सप’नामा हुन्छ । र क्रमस ति सबैकुरा ह’राउँदै र विलिन हुँदै जान्छ ।
यो गहिरो सु’षुप्तिमा केहि मान्छे अनन्तकालका लागि ह’राउँछन्, कोहि यहि अवस्थाबाट दोस्रो ग’र्भमा जन्म लिन पुग्छन् । प्र’कृतिले उसको भाव, विचार र जागरणको अवस्था अनुसार ग’र्भ उपलब्ध गराउँछ । तर, व्यक्ति स्मृतिवान छन् भने सु’षुप्तिमा गएर केहि कुरा सम्झने कोसिस गर्छन् ।
फेरी ऊ जाग्र’त वा स्वप्न अवस्थामा रहेको भेद पाउँदैनन् । यस्ता व्यक्ति त्यसबेलासम्म पुर्नजन्म लिदैनन्, जब उसले पूर्ण रुपले आफ्नो स्मृति गु’माउँदैन । अपवादको रुपमा कसैले स्मृ’ति बाँकी रहदा नै जन्म लिन्छ । उनीहरुलाई पूर्व जन्मको ज्ञान पनि हुन्छ ।
म’रेको मान्छेले तर्साउँछ ? जो व्यक्ति स्मृ’तिवान, जाग्रत हुन्छ, उसको लागि दोस्रो जन्म क’ठिनाइ हुन्छ , किनभने प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार दोस्रो जन्म लिनका लागि बेहोश वा स्मृ’तिहीन अवस्था चाहिन्छ । उनीहरु भू’त-प्रेत यो’नीमा रहन्छन् र केहि समयसम्म ग’र्भको खोजीमा भौ’तारिन्छन् ।